Handuan | Omenala osisi eji eme ulo
Ọkachamara Ndị Ọrụ Omenala Ndị Omenala Na China
Ugboro abụọ Bed
Akpụkpọ ụkwụ kabinet
AKPAN ẸKPỌ ẸDU EMI
$ $ $> A na-ekekarị ụdị ndị na-eme ngwa ngwa ụlọ na ụdị nke oge a na ụdị Scandinavia. Companylọ ọrụ ahụ ejirila ihe eji arụ ọrụ dị elu ma jiri nlezianya họrọ ya, ihe ndị achọrọ maka ịdị mma.
Ngwongwo eji eme omenala
Designdị Uche Pụrụ Iche Na nke Oge A
Usoro nchịkwa siri ike na-ahụ maka nke ga-emezu ihe ụfọdụ.
Kachasị mma n'ọnụ ụzọ oke dị egwu North Europendory Home Roe Shoe Shoe Shoe Camiti kabit.Ngwaahịa ahụ enyerela nchekwa. Usoro nchekwa nke ewuru ewu, dị ka nchebe na-emebi emebi, nchebe karịrị nchekwa, na mkpọchi nchekwa, hụ na ọrụ nchekwa.Portrun kacha mma dị egwu ụlọ ebe a na-eme njem ọdụ ụgbọ mmiri North Europendory Roe Shoe Directomlọ Ọrụ Porch - Aka
Tebụl kọfị arụ ọrụ
Tebụl kọfị arụ ọrụ.
Na ngwaahịa nnyocha na mmepe, ụlọ ọrụ nwere a ọkachamara na ikenyeneke mbiet R
D otu, ichikota R.& D, mmepụta na ire ahịa.
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ gụnyere usoro nke ụlọ, usoro ụlọ obibi, usoro iri nri, usoro akwa ụmụaka, akwa ngwugwu ụlọ ezumike, yana ngwugwu ngwugwu ụlọ niile. Ihe ndị bụ isi bụ usoro ime ụlọ ime ụlọ, gụnyere akwa akwa abụọ na akwa akwa osisi. A na-ekekarị ụdị ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ n'ụdị ọgbara ọhụrụ na ụdị Nordic. Companylọ ọrụ ahụ ejirila ihe eji eme ihe dị elu ma jiri nlezianya họrọ nhọrọ, izu oke nke ọrụ aka, yana ụdị ụdị ya pụrụ iche, ọmarịcha ọrụ aka, na ọrụ obi eziokwu, enwetawo ihu ọma nke ndị ahịa, merie ihe karịrị mba iri na usoro ọhụụ ọhụụ. Ikike nchọpụta Kemịkalụ, wee bụrụ mbido mbụ nke ngwaahịa ngwaahịa Onye ndu.
Daysbọchị 45 laghachi
3 afọ akwụkwọ ikike
Oge nchekwa 90 n'efu
Nkesa 250 mepere emepe
Ndị Ọrụ Companylọ Ọrụ
Foshan Handuan Ngwá ụlọ Co., Ltd. e guzobere na 2012.
Ọ dị na Lecong, Shunde, Foshan, Guangdong, China, nke bụ ụlọ nrụpụta ụlọ kachasị ibu n'ụwa. Nnukwu ulo akwukwo ọhụụ nke oge a na otu ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa mma, ugbu a nwere ntọala nke oge a nke mita 10,000, ndị ọrụ dị ugbu a nke ndị mmadụ 100, ụlọ ọrụ ahụ na-ewebata ụdị ụlọ ama ama na usoro ndị ọzọ na -emepụta usoro iji hụ nchebe ngwaahịa N'ihi ọnọdụ ebumpụta ụwa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọkachamara na ọmarịcha R
& D otu n'ime nyocha ngwaahịa na mmepe, na ndị otu ọkachamara ọkachamara na usoro azụmaahịa zuru oke n'ịzụ ahịa, na-etinye ọnụ R.& D, mmepụta na ire ahịa.
A na-ekekarị ụdị ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ n'ụdị nke oge a na ụdị Nordic. Ngwongwo ime ụlọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere akwa akwa abụọ na akwa akwa osisi. Companylọ ọrụ ejirila ngwa ngwa dị elu wee jiri nlezianya ahọrọ. Usoro chọrọ bụ ọkaibe, ụdị ụdị ọpụrụiche ya, ọmarịcha ọrụ aka na ọrụ ji obi eziokwu merie imirikiti ndị ahịa nwere ihu ọma, merie ihe karịrị ụdị iri mba na ngwa ahịa ihe eji emepụta ihe, wee bụrụ onye ndu na mbido mbụ nke ngwaahịa ụlọ ọrụ.
Soro echiche kachasị nke ergonomics, ahụike na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Ọkachamara Elu akwa nwere akwa ndina akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa nwata ndina bed bed multifunctional bunk bed manufacturers
Handuan na No.19, Kangtai South Road, ngọngọ B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City Main ngwaahịa Elu akwa na akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa. A na-arụpụta Handuan na-eji ike ọrụ aka siri ike, akụrụngwa dị elu. Ọ nwere akwa siri ike na-adịgide adịgide nke na-akwado nchapụta na ọdịdị iji hụ na nyochachara maka ime ụlọ ihi ụra na ụra abalị na-atọ ụtọ. A nwalere Handuan maka nkwụsi ike akụkụ, arụmọrụ na ngwa ngwa agba iji mezuo iwu chọrọ nke ụlọ ọrụ ihe ndina.
Egwuregwu tebụl nke obere tebụl nke dị na tebụl jikọtara ọnụ tebụl tebụl tebụl tebụl tebụl nke tebụl nke tebụl na tebụl ngwakọta ihe ọmụmụ
Handuan na No.19, Kangtai South Road, ngọngọ B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City Main ngwaahịa Modern minimalist table bookcase kabinet integrated ide mgbakwasa table Nordic home table table na oche Nchikota ọmụmụ ngwá ụlọ. Foshan Handuan Ngwá ụlọ Co., Ltd. na-eji nnukwu mma dị ka isi ihe. Ngwaahịa ahụ chọrọ ntụkwasị obi achọrọ. Solidlọ ya siri ike na-ewepụta ihe ndị dị elu na ihe mkpuchi iji gbochie ujo ọ bụla. Enwere ike ịmepụta Handuan anyị n'ụdị ụdị na nkọwa dị iche iche.